I-China Diesel Pump yokucima umlilo abavelisi kunye nabathengisi | KAIQUAN
I-XBC ye-injini yedizili yompompo womlilo sisixhobo sokuhambisa amanzi esenziwe yinkampani yethu ngokwe-GB6245-2006 impompo yomlilo kumgangatho wesizwe. Isetyenziswa ikakhulu kwinkqubo yokuhambisa amanzi ngomlilo wepetroleum, ishishini leekhemikhali, igesi yendalo, isityalo samandla, isikhululo seenqwelo-moya, isikhululo segesi, ukugcinwa.
I-XBC ye-injini yedizili yompompo womlilo sisixhobo sokuhambisa amanzi esenziwe yinkampani yethu ngokwe-GB6245-2006 impompo yomlilo kumgangatho wesizwe. Isetyenziswa ikakhulu kwinkqubo yokuhambisa amanzi ngomlilo wepetroleum, ishishini leekhemikhali, igesi yendalo, isityalo samandla, isikhululo seenqwelo-moya, isikhululo segesi, ukugcinwa, ukwakha okuphezulu kunye namanye amashishini kunye namasimi. Ngokusebenzisa isikhungo sovavanyo lwemveliso yomlilo (isatifikethi) sesebe lolawulo olungxamisekileyo, iimveliso ziye zafikelela kwinqanaba eliphambili e-China.
Impompo yomlilo wedizili ingasetyenziselwa ukuhambisa amanzi acocekileyo ngaphandle kwamasuntswana aqinileyo angaphantsi kwama-80 ℃ okanye ulwelo olunezinto ezibonakalayo nezamachiza ezifanayo namanzi. Kwinqanaba lokudibana neemeko zokulwa umlilo, iimeko zokusebenza zonikezelo lwamanzi lwasekhaya kunye nemveliso ziya kuqwalaselwa. I-XBC idizili yompompo womlilo ingasetyenziselwa kungekuphela kwenkqubo yokuhambisa amanzi ngomlilo, kodwa nakwinkqubo efanayo yokuhambisa amanzi yokulwa umlilo kunye nobomi, kodwa nakwinkqubo yonikezelo lwamanzi kulwakhiwo, umasipala, umzi-mveliso kunye nezemigodi, unikezelo lwamanzi kunye nomjelo, inqanawa, ukusebenza ebaleni kunye nezinye izihlandlo.
Uluhlu olubanzi lohlobo lwento ebonakalayo: inqanaba elinye lokufunxa ipompo ye-centrifugal, impompo ethe tyaba, inqanaba elinye lokumpompa, impompo yeshafti ende kunye nezinye iintlobo zempompo zikhethelwe iyunithi, zinoluhlu olubanzi lokuhamba kunye noxinzelelo.
Umsebenzi wokuzenzekelayo: xa iyunithi yempompo yamanzi ifumana umyalelo wolawulo olukude, okanye ukungaphumeleli kwamandla ombane, ukusilela kwempompo yombane kunye neminye imiqondiso (yokuqala), iyunithi iya kuqala ngokuzenzekelayo. Izixhobo zineenkqubo ezizenzekelayo zolawulo lwenkqubo, ukufunyanwa kwedatha okuzenzekelayo kunye nokubonisa, ukufumanisa isifo ngokuzenzekelayo kunye nokukhuselwa.
Inkqubo yokubonisa ipharamitha: bonisa imeko yangoku kunye neeparameter zesixhobo ngokungqinelana nemeko yokusebenza yangoku yesixhobo. Ubume besimo kubandakanya ukuqala, ukusebenza, ukukhawulezisa, isantya, (ukungasebenzi, isantya esipheleleyo) ukucima, njl.njl. Iiparameter zenkqubo zibandakanya isantya, uxinzelelo lweoyile, ubushushu bamanzi, ubushushu beoyile, ivolthi yebhetri, ixesha lokusebenza eliqokelelweyo, njl.
-Umsebenzi weAlarm: qala ukusilela kwe-alamu, i-alamu yoxinzelelo lweoyile kunye nokucima, ialam ephezulu yeqondo lokushisa kwamanzi, ialam yeqondo lokushisa kweoyile ephezulu, ialamu yombane webhetri ephantsi, ialamu yenqanaba lamafutha asezantsi, ialam egqithisileyo kunye nokucima.
Iindlela ezahlukeneyo zokuqala: ukuqala kwindawo kunye nolawulo lokumisa, ukuqala kude kunye nokumisa ulawulo lweziko lolawulo, ukuqala nokusebenza ngamandla ombane.
-Umqondiso wokunika ingxelo ngobume: ukusebenza kwesalathiso, ukungaphumeleli kokuqalisa, ialam evakalayo, ukuvalwa kwamandla olawulo kunye nezinye iindawo ezinemiqondiso.
Ukutshaja ngokuzenzekelayo: ngokulinda kwesiqhelo, inkqubo yolawulo iya kudada ngokuzenzekelayo ibize ibhetri. Xa umatshini usebenza, umvelisi wenethiwekhi we-injini ye-diesel uya kuhlawulisa ibhetri.
Isantya sokusebenza esihlengahlengiswayo: xa ukuhamba kunye nentloko yempompo yamanzi kungangqinelani neemfuno ezizezona, isantya esilinganisiweyo seinjini yedizili sinokulungiswa.
-Ibhetri yokuqala yebhetri yokuqala: xa ibhetri enye isilele ukuqala, iya kutshintshela kwenye ibhetri.
-Ulondolozo lwebhetri yasimahla: akukho sidingo sokongeza i-electrolyte rhoqo.
-Ibhatyi yamanzi yokufudumeza kwangaphambili: iyunithi kulula ukuqala xa iqondo lobushushu lihle.
Isantya: 990/1480/2960 ngomzuzu
Uluhlu lwamandla: 10 ~ 800L / S.
Uluhlu loxinzelelo: 0.2 ~ 2.2Mpa
Uxinzelelo lomoya ojikeleze umhlaba:> 90kpa
Ubushushu Ambient: 5 ℃ ~ 40 ℃
Ukufuma Relative zomoya: ≤ 80%
Egqithileyo XBD Series nkqo Axis Long bokulwa Pump
Okulandelayo: W Seeries Izixhobo zoxinzelelo ezizinzileyo
I-KZJXL Series ifake iiMpompo zeSlryry